अर्थमन्त्रीज्यू ! निजीले हैन, स्थानीय सरकारले सुधार र व्यवस्थापन गर्ने हो सामुदायिक विद्यालय, नपत्याए हेर्नुस् त तिलोत्तमाको काम – Mayorkhabar.com
अर्थमन्त्रीज्यू ! निजीले हैन, स्थानीय सरकारले सुधार र व्यवस्थापन गर्ने हो सामुदायिक विद्यालय, नपत्याए हेर्नुस् त तिलोत्तमाको काम
Mayor Khabar २५ जेष्ठ २०७७ १५:३६	No Comments
यहीँ जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गरेलगत्तै मूलतः दुई वटा विषयमा बढी चर्चा भए । एउटा विषय शिक्षा र अर्को विषय यातायातसँग जोडिएको छ । अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा निजी विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्नुभएको छ । यस्तै विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार दर पनि बढाइएको छ । यी दुई विषयलाई लिएर सत्तापक्ष र विपक्षबाट तीव्र विरोध भैरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आक्रोश देखिएको छ । एकाएक सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निजी विद्यालयलाई दिने कुरा कसरी आयो भन्ने बारेमा तीव्र बहस भैरहेको हो ।
हुन त शिक्षा मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणमा उल्लेख भएको विषयलाई गलत रुपमा नबुझ्न आग्रह गर्नुभएको छ । तर, सचेत वर्ग उहाँको आग्रहप्रति विश्वस्त देखिँदैन । शिक्षालाई निजी क्षेत्रसँग जोडिएको विषयप्रति नै सामाजिक सञ्जालमा तीव्र विरोध देखिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य भनेका मानिसका आधारभूत आवश्यकता हुन् । यी दुवै विषयमा सरकारको पूर्णजिम्मेवारी हुनुपर्छ । स्रोत र साधनको हिसाबले यी दुवै विषयलाई सरकारले पूर्णतः आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न केही वर्ष लाग्ला । तर, अहिलेको अवस्थामा सरकारी स्तरबाट शिक्षा र स्वास्थ्यमा भैरहेका कामलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा त्यसलाई तेजोबध गर्नेगरी संघीय सरकारबाट नीतिगत व्यवस्था हुनु नै आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
हो, निजी विद्यालयमा राम्रो व्यवस्थापकीय दक्षता छ । यसको अर्थ सामुदायिकमा छैन भन्ने होइन । कयौं सामुदायिक विद्यालयहरु निजीभन्दा सशक्त छन् । उनीहरुको शैक्षिक गुणस्तर निजीको भन्दा राम्रो छ । यसैले सामुदायिक विद्यालयहरु आफैंमा कमजोर छैनन् । अहिले मावि तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकार मातहत छ । सामुदायिक विद्यालयको भौतिक र शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न पालिकाहरु दत्तचित्त भएर लागेका छन् । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रीबाट नीतिगत रुपमा आएको कुरालाई राम्रो मान्नै सकिँदैन ।
दुई तिहाईंको कम्युनिष्ट सरकारले शिक्षालाई निजी क्षेत्रको जिम्मामा जोड्नुलाई राम्रो मान्न सकिँदैन । कुरा साम्यवाद र समाजवादको गर्ने, काम चाहीँ पूँजीवादीको जस्तो गर्नुहुँदैन । अहिले मावि तहसम्मको शैक्षिक अधिकार स्थानीय तहमा छ । अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न दत्तचित्त भएर लागिरहेका छन् । अधिकांश पालिकाहरुले पहिलो नम्वरमै शिक्षालाई राखेर सुधारका कामहरु गरिरहेका छन् । सामुदायिक विद्यालय सुधारको काम स्थानीय पालिका आफैंले गर्न सक्छन् भन्ने कुरा सिक्न÷जान्न तिलोत्तमा नगरपालिकामा आएर जोकोहीले बुझ्न सक्छ । यहाँ जनप्रतिनिधि आएदेखि नैं शिक्षाको भौतिक र शैक्षिक गुणस्तर सुधारका तमाम काम भएका छन् ।
जनप्रतिनिधि आइसकेपछि तिलोत्तमा नगरपालिकाले मुख्य प्राथमिकतामा राखेको क्षेत्र शिक्षा हो । “बालबालिका विद्यालय प्रवेशको पहिलो आधार : सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक र भौतिक पूर्वाधारमा सुधार” भन्ने नाराका साथ समग्र नगरको शिक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन अघि बढाइएका कार्यक्रमबाट आशालाग्दो नतिजा आउन थालेको छ । शैक्षिक सत्र २०७५ को तुलनामा शैक्षिक सत्र २०७६ मा सामुदायिक विद्यालयमा आठ सय बढी विद्यार्थी थप भर्ना हुनुले सामुदायिक विद्यालयप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको देखिन्छ । तिलोत्तमामा नगरको समग्र शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि भएका प्रमुख कार्यहरु निम्न छन्:
२. जंगफुडलाई निरुत्साहित गरी घरमैं बनेका स्वास्थ्यबद्र्धक खाजा प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न कक्षा १ देखि ५ सम्मका सबै बालबालिकाहरुलाई टिफिनक्यारीको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
१५. शिक्षक—विद्यार्थी अनुपात अत्यन्त कम भएका ३ वटा सामुदायिक विद्यालय पायक पर्ने विद्यालयमा समायोजन गरिएको छ ।
१७. सामुदायिक विद्यालयहमा फुलबारी निर्माण गरी सौन्दर्यकरण गर्दै लगिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षासँग सम्बन्धित विषय निम्नानुसार छन्:
(लेखक अर्याल तिलोत्तमा नगरपालिकाका मेयरको सचिवालय प्रमुख हुनुहुन्छ)
Previous Previous post: सबैको प्रश्न हुन्छ, काम कहिले देखिन्छ मेयरज्यू ?– मेयर शर्माले कवितामार्फत् यसो भने …
Next Next post: युद्ध– कोरोनाविरुद्ध–६१ : उपत्यकाका ५ उपमेयरको स्पष्टोक्ति, ‘न्याय लक भएको छैन’
हेटौंडाका कोरोना संक्रमितलाई रिद्धि सिद्धिको सहयोग २५ जेष्ठ २०७७ १५:३६
नगरपालिकाको काम अब ‘शहरको आवाजमा’ २५ जेष्ठ २०७७ १५:३६
कोरोना संक्रमित मेयर सरावगी निको भए, पछिल्लो जाँच नेगेटिभ २५ जेष्ठ २०७७ १५:३६
विभेदमा पिल्सिएको मधेशको विकासमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच एकमत आवश्यक : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लाम्गादे (भिडियो सहित) २५ जेष्ठ २०७७ १५:३६
सैनामैनाका १ सय ८८ जनाले पाए लालपुर्जा २५ जेष्ठ २०७७ १५:३६